Huawei dia hanokatra fivarotana ara-batana voalohany ivelan'i Shina any Vienna, Austria | Androidsis
Huawei tara amin'ny fidirana amin'ny lisitry ny mpanamboatra fitaovana finday izay manana magazay ivelan'ny tany manerantany. Samsung, Apple ary Microsoft dia sasany amin'ireo olona goavambe manana ny azy eny-tsipika handroaka ny varotra sy ny marika any amin'ny ambaratonga avo kokoa.
ankehitriny, ny mpanamboatra sinoa dia ho tonga amin'ny fivarotana an-tserasera any Wina, Austria, ho an'ny fahavaratra amin'ity taona ity. Toa fihetsika stratejika ho an'i Huawei izany, izay misy ny fanoherana ny eropeana manoloana ny fanerena avy amin'ny mpanao lalàna amerikana. Izy io no fivarotana voalohany an'i Huawei any ivelan'i Sina.
Na dia mpanamboatra finday avo lenta faharoa any Austria aza i Huawei, dia tsy nanokatra magazay tokana tao amin'ny firenena i Huawei. Matetika, hetsika tsara izany ary hanampy ny orinasa hitazona tontolo iainana tsara. Ankoatr'izay, ny fitaovany tambajotra 5G dia vonona ny hitsingevana miaraka amin'ireo mpandraharaha lehibe telo ao amin'ny firenena. (Jereo: Inona no azontsika antenaina amin'ny Huawei ho an'ny MWC 2019?)
Amin'io lafiny io, ireo mpandraharaha toa ny A1 Telekom Austria, ny Deutsche Telekom's T-Mobile Austria ary ny Hutchison Whampoa's Drei Austria dia mifampiresaka mba hitsapana ireo tambajotra 5G miaraka amin'ilay mpanamboatra sinoa.
Ankoatr'izay, i Joe Kelly, filoha lefitry ny serasera orinasa Huawei, dia nandà ny fiampangana nataon'ny governemanta amerikana tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety iray tany Vienna. Ny orinasa dia nandà mivantana ny fandraisana anjara amin'ny fitsikilovan'ny governemanta. Tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety dia nanampy i Joe fa handà mihitsy aza izy raha angatahan'ny governemanta sinoa hitsikilo izy.
Dingana refesina an'ny Huawei izany dia hanampy ny orinasa hilamina any Eropa. Na ny mpanjifa sy ny mpanao politika aza dia tsy ho resin'ny tsindry avy any Etazonia. Hatramin'ny volana vitsy lasa izay dia niady i Huawei noho ny fiampangana nataon'ny firenena amerikana momba ny filaminam-pirenena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Huawei hanokatra fivarotana ara-batana voalohany ivelan'i Shina any Vienna, Austria